အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်မှောက်တာကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နှုတ်ပိတ်မနေသင့်ပါ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« U Thein Sein Government and Daw Suu led NLD should resign if dare not control the hatemongers
Once Brainwashed with religion, many followers are ready to kill others and they are even willing to sacrifice their lives »
မနေ့က သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ “ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်ဆောင်နေ”ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျနော့ခေါင်းထဲကို ၀င်လာတဲ့ အတွေးများက များလွန်းနေတယ်။ ပထမဦးဆုံး သတိရလိုက်တာကတော့ ဟိဂ်ျရီ (၇) ခုနှစ်မှာ မက္ကဟ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ ကာဖိရ်တွေက ကျနော်တို့ရဲ့ နှစ်ဘ၀သခင် ကျေးဇူးတော်ရှင်နဲ့ ကိုယ်တော့်ရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါ မွတ်စလင်မ်တွေကို စီးပွားရေး၊ လူမူရေးသပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို သပိတ်မှောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာကို မဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ပိုပြီးတော့တောင် ခိုင်မာအောင် ပြုပေးလိုက်သလို ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ အစ္စလာမ့်သမိုင်းနဲ့ ဒဏ္ဍာရီမဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွေက သက်သေခံခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ လူ့ဗာလတွေရဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ် သပိတ်မှောက်ခြင်းအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှ ဂရုစိုက်နေစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။
This entry was posted on January 21, 2013 at 9:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.